Wararka - Sida loo rakibo darbiyada PCV-ga qurxinta
Xirmooyinka darbiyada PVC waa xulasho wanaagsan qurxinta derbiga. Saamaynta guud ee qurxinta waa mid aad u saraysa oo qiimaha waa la awoodi karaa. Waxaad ubaahantahay inaad barato xoogaa aqoon xirfadeed markaad rakibineyso, si dhismaha qurxinta uu u noqon karo mid dhaqso badan oo saameynta qurxinta loo damaanad qaadi karo. Aan ku baro adiga, sida loo rakibo guddiga qurxinta darbiga pvc?
1. Sida loo rakibo boodhka qurxinta darbiga pvc
1. Markaad qurxinayso, waxaad dooran kartaa nooca ganaaxa qalalan, oo ay ka mid tahay hagaajinta keelka derbiga hoose marka hore, iyo ku xiridda guddiga dahaarka kuleylka qurxinta leh keel-ka iyada oo loo marayo kala-goysyada birta ama barroosinka gaarka ah. Isku-xidhka udhaxeeya kala-goysyada waxaa lagu dhejin karaa nidaamka dahaadhka derbiga dibedda ee sabuuradda la saaray, sabuuradda benzene ama dhogorta dhagaxa ah. buuxiyo.
2. Nooca si buuxda u rakiban ayaa aad ugu habboon mashaariicda dahaarka derbiga gudaha. Sidaa darteed, inta lagu guda jiro rakibidda nidaamka kuleylka kuleylka dibadda, guddiga isku dhafka kuleylka qurxinta ee isku dhafan iyo darbiga hoose ayaa kaliya ku xiran isku xirnaanta ama isku xirnaanta dhammaystiran, taas oo loo yaqaan nooc dhammaystiran oo isku xidhan. Habka gacanta waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha naqshadeynta qaabdhismeedka gaarka ah. Isticmaal madaafiic isku dhafan ama qalab kale si aad u buuxiso inta u dhexeysa kalagoysyada.
3. Isku darka qoriga barroosinka iyo barroosinka ayaa inta badan ku saleysan shuruudaha dhismaha. Nidaamka kuleylka kuleylka ee dibadda ee guddiga qurxinta kuleylka kuleylka waxaa lagu daraa iskudhafka iyo usha barroosinka si loo hagaajiyo guddiga qurxinta kuleylka ee derbiga. Saldhigga waxaa lagu daraa si buuxda oo isku xiran oo qalalan, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa injineernimada.
2. Hordhaca faa'iidooyinka gidaarka PCV
1. Faa’iidada ugu weyn waa culeyskeeda fudud. Shaqaaluhu aad ayey u dabacsanaayeen intii ay socdeen dhismaha. Waxay leedahay kuleylka kuleylka iyo shaqada ilaalinta kuleylka. Adeegso guddiga qurxinta darbiga PVC. Dareen ahaan, sidoo kale waa mid saaxiibtinimo u leh deegaanka. Gurigu waa jiilaal. Xilliga xagaaga waa diirran oo qabow, kana takhalusi kara baahida qaboojinta iyo keydinta tamar badan, laakiin sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyinka uumiga-caddeyn, olol-celin, aashitada iyo caabbinta alkali, caabbinta daxalka, jikada ama saqafka suuliga ama derbiyada qurxinta.
2. Waxyaabaha lagu qurxiyo darbiyada PVC waxay leeyihiin xasilooni sare iyo sifooyin wanaagsan oo koronto. Isticmaalka muddada-dheer kadib, way ka adkeysi badan tahay qalabka kale ee qurxinta derbiga. Kama baqo dhalaalka iyo iftiinka qoraxda. Waxay leedahay sifooyin wanaagsan oo gabowga. Way fududahay in la alxamo afka oo wuxuu ku dhegan yahay darbiga.
3. Qaab-dhismeed sare, xoog foorarsi sarreeya, iska caabin saameyn xoog leh, dheereyn heer sare ah biririfta, keydinta qalabka ka dib dhammeynta qurxinta, ma fududa in qashin la keeno iyo keydinta kharashka qurxinta. Guddiga qurxinta darbiga PCV-ga wuxuu leeyahay dusha sare, midabyo dhalaalaya, qaabab kala duwan, saameyn qurxoon oo qurxoon, iyo codsiyo badan oo qurxin leh.
4. Nidaamka dhismaha waa mid aad u fudud, waa mid aad ugu habboon in la bilaabo rakibaadda guriga, rakibistuna waa mid aad u habboon. Guddiga qurxinta derbiga ee PVC waa sahlan tahay in lagu nadiifiyo nolol maalmeedka. Kama cabsanayo wax maraq ah ama carruurta sameeya dardaaran markay doonaan. Si tartiib ah ugu tirtir maro qoyan si aad nadaafadda u soo celiso.
5. Gudiga qurxinta darbiga ee PVC waa shey qurxin balaastik ah. Guddiga PVC wuxuu ka sameysan yahay qaab dhismeedka mesh malab. Sababtoo ah qeexitaankiisa, midabada iyo qaababka, waa mid aad u qurxin, oo sidoo kale loo yaqaan filimka qurxinta, oo loo isticmaali karo derbiga gudaha iyo qurxinta saqafka, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa qaababka kala duwan ee qurxinta guriga.